सजावटकाे विकल्प बन्दै वालपेपर « Mero LifeStyle
सजावटकाे विकल्प बन्दै वालपेपर
सुमित्रा लुईंटेल	||5April, 2021
तपाई घरको भित्री कोठामा रङ्ग लगाउदैं हुनुहुन्छ ? रङ्ग लगाउँदा घर भित्रका सामानहरूमा लाग्छ की भनेर चिन्ता त हुनुहुन्न । तपाईँको घर भित्रको कोठालाई आकर्षक बनाउन सजिलो तथा सस्तो उपाय हुन सक्छ वालपेपर ।
आजभोलि कोठाको आकर्षण बढाउन वालपेपर लोकप्रिय बन्दै आइरहेको छ । वाटर प्रुफ र टिकाउ मानिने वालपेपर रङ्ग लगाउनु र निकाल्नु भन्दा सजिलो मानिन्छ ।
वालपेपरको प्रयोग घर भित्रको कोठामा मात्र नभएर अफिस, होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतका ठाउँहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । वालपेपरको मुख्य विशेषता भनेको कोठाको भित्तालाई आकर्षक बनाउनु नै हो एभ्रि घरका निर्देशक राजेश ढकाल बत्ताउँछन् । बिशेषगरी लिभिङ रुम, बालबालिकाको कोठा, प्यासेज जस्ता ठाउँलाई आकर्षक देखाउन वालपेपरको प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपालमा अहिले चीनमा निर्मित वाल पेपर नै धेरै रुचाइएको छ । युरोपियन वालपेपरहरू पनि नेपाली बजारमा पाइन्छ । तर त्यसको मूल्य दोब्बर बढी रहेको छ ।
वालपेपरको मुख्य विशेषता भनेकै यो विभिन्न कलर र डिजाइनमा पाउनु नै हो । लिभिङ रुम र बेड रुमको भित्तालाई आकर्षक बनाउन विभिन्न फुल, प्राकृतिक दृश्यहरू रहेको डिजाइनमा वालपेपर पाउन सकिन्छ । यो बाहेक आफ्नो इच्छा अनुसारका वालपेपरहरूको पनि बजारमा छनोट गर्न सकिन्छ । रङ्ग लगाएर भित्ताको आकर्षण वालपेपर लगाएको जस्तो किसिमको निकाल्न नसक्ने हुनाले पनि वालपेपरको आकर्षण बढेको देखिन्छ । अहिले बजारमा वालपेपर रङ्ग, बुट्टा र गुणस्तर अनुसार फरक फरक मूल्यमा रहेको छ ।
कति पर्छ ?
बजारमा वालपेपर रोलको हिसाबले किन्न पाइन्छ । एक रोल वालपेपर ५७ वर्ग फिटको हुन्छ । यो सबैभन्दा चल्तीमा रहेको आकार हो । एक रोल वालपेपर सात फिट लम्बाई र सात फिट चौडाइको कोठामा लगाउन पुग्छ । कोठा ठुलो भएमा रोल थप्नु पर्छ ।
वालपेपर एक पटक राम्ररी टाँसेपछि हतपत उप्किँदैन । राम्रो हेरचाह गर्न सकियो भने यो दस वर्षसम्म फेर्नु पर्दैन । यसमा सामान्य दाग धब्बा लाग्दा सजिलै पुछेर हटाउन सकिन्छ ।
ढकालका अनुसार अहिले नेपाली उपभोक्ताले रुचाएको वालपेपर ५७ वर्ग फिटकै हो । यसको ‘फिटिङ चार्ज’ सहित २२ सयदेखि २५ सयसम्ममा एक रोल वाल पेपर पाइन्छ । नेपालमा अहिले चीनमा निर्मित वाल पेपर नै धेरै रुचाइएको छ । युरोपियन वालपेपरहरू पनि नेपाली बजारमा पाइन्छ । तर त्यसको मूल्य दोब्बर बढी रहेको छ । त्यसैले कमैले मात्र युरोपियन वालपेपर प्रयोग गर्छन् ।
पुटिन गरेर छोडिएको भित्तामा वालपेपर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई फेबिकोलको सहायताले भित्तामा सजिलै टाँस्न सकिन्छ । तर वालपेपर लगाउँदा दक्ष व्यक्तिकै आवश्यकता पर्छ । वालपेपर एक पटक राम्ररी टाँसेपछि हतपत उप्किँदैन । राम्रो हेरचाह गर्न सकियो भने यो दस वर्षसम्म फेर्नु पर्दैन । यसमा सामान्य दाग धब्बा लाग्दा सजिलै पुछेर हटाउन सकिन्छ ।
फम वालपेपर पानी रसाएको भित्तामा लगाउन एकदमै उपयुक्त हुन्छ । यसले भित्ता छोप्छ र पानी आउन समेत रोक्छ । यसले कोठाको सजावट र सुरक्षा दुवै गर्छ ।
काठमाडौँको धेरैजसो घरको कोठामा पानी रसाउने समस्या हुन्छ । भित्तामा पानी रसाएको छ भने त्यस्तो स्थानमा वालपेपर लगाउनु हुँदैन । पानी रसाउने कोठामा रङ्ग लगाउँदा रङ्ग पनि उप्किने समस्या हुन्छ । त्यस्तो भित्तामा वालपेपर जस्तै देखिने फम वालपेपर लगाउन सकिन्छ । फम वालपेपर पानी रसाएको भित्तामा लगाउन एकदमै उपयुक्त हुन्छ । यसले भित्ता छोप्छ र पानी आउन समेत रोक्छ । यसले कोठाको सजावट र सुरक्षा दुवै गर्छ ।
इच्छा अनुसार बनाउन सकिन्छ ?
वालपेपरको अर्को विशेषता भनेको ग्राहकले आफ्नो इच्छा अनुसार परिवारको तस्बिर अथवा कुनै पनि दृश्य राखेर वालपेपर बनाउन सक्छन् । फर्निचर, कार्पेट सुहाउँदो वालपेपरले घरको कोठाहरूलाई प्राकृतिक जस्तै देखाउँछ । यस किसिमको वालपेपर प्रति वर्ग फिट एक सय पचास रूपैंया पर्ने ढकाल बत्ताउँछन् ।